Lacagtii jahwareerka ka abuurtay suuqyada B/weyne oo lasoo bandhigay (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Lacagtii jahwareerka ka abuurtay suuqyada B/weyne oo lasoo bandhigay (SAWIRO)
Kullan ay magaalada B/weyne kuwada yeesheen ganacsatada magaaladaasi iyo maamulka Hirshabeele ayaa waxaa lagu soo bandhigay lacagtii maalmaha ugu dambeysay jahwareerka ka abuurtay suuqyada ku yaalla magaaladaas.
Kullankaasi oo ay ka qeyb galeen madax ka tirsan maamulka Hirshabeele sida madaxweynaha maamulkaas Cali C/laahi Cosoble iyo wasiiro ayaa waxay kusoo bandhigeen lacagahaasi oo ay sheegeen inay kala kulmeen dhibaato xooggan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo kullanka ka hadlay ayaa sheegay in maamulka Puntland ay ka doonayaan magdhaw, maadaama lacagta faalsada ah ay ka timid deegaanada Puntland.
“Waxaan halkaan ku aragnaa umad dhacan, umad hantidooda nool laga qaatay looguna bedalay waraaqo lasoo sameeyay, xaqiiqda waxay tahay ganacsiga ugu badan dadkaan waxay la leeyihiin dowlad goboleedka Puntland, waxay dadkaan ka marqaati kacayaan in lacago been abuur ah lagu daabacayey Puntland in wax looga iibsan jiray dowlad goboleedka Hirshabeele ka hor, laakiin nasiib darro lacagihii sidaasi ahaa oo maalin walbo hantidooda ku bedalanayay la yiraahdo raali ahaada cid qaadaneysa malahan.” Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Cali C/laahi Cosoble.
Dhinaca kale, madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan ganacstada lacagtaasi faalsada ah soo gelisay deegaanada Hirshabeele.